किष्ट मेडिकल कलेजको चरम लापर्वाही ! - PUBLICAAWAJ
किष्ट मेडिकल कलेजको चरम लापर्वाही !
प्रकाशित : आइतबार, चैत १०, २०७५१२:४९ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, किष्ट मेडिकल कलेज प्राय विवादमा रहिरहन्छ । फेरी पनि किष्ट मेडिकल कलेज विवादमा आएको छ । उक्त कलेजको परिक्षाको उत्तरपुस्तिका पाना हराएको जस्तो र कुनैमा थप पाना टाँसेको जस्तो पाइएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यति मात्र नभएर विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिकामा परीक्षकको हस्ताक्षर समेत छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबारको बैठकमा यस बारे जानकारी दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ उत्तर पुस्तिकामा एकरुपता देखिएन । पाना हराएको जस्तो पनि देखिए । कुनैमा उत्तरपुस्तिकामा परीक्षकको हस्ताक्षर छ, कुनैमा छैन । कुनैमा कपि टाँसेको जस्तो पनि देखिन्छ । ‘
यसबारे मेडिकल विज्ञहरुले औपचारिक रुपमा केहि नबोलेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘ किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरुले पैसा तिरेको रसिद रहेनछ । किन छैन भन्दा कलेज सन्चालकले हाम्रो प्रावधान नै छैन भन्छन् । शुल्क विवरण पाउन गाह्रो रहेछ । ‘
सांसद चौधरीलाई कोराना सङ्क्रमण